Isampula seSikolo seGreydri esebenzayo I-letter of Recommendation
Kubafundi nabazali Iingcebiso zeeNcwadana
I-Letter Recommendation Effective: Isampula
Enoba itekisi ilungile okanye yanele ngokwaneleyo ayixhomekeke nje kuphela kwimixholo kodwa ukuba ihambelana njani neprogram oyisebenzisayo. Khawuqwalasele le leta elandelayo ebhaliweyo kumfundi ofaka isicelo kwisifundo esiphumeleleyo kwi-intanethi:
Kule meko, umfundi usetyenziswa kwiprogram ye-intanethi ye-intanethi kwaye amava ka-profesa nomfundi sele ekhompyutheni ye-intanethi. Ukuqwalasela le njongo, le ncwadi ilungile.
Uprofesa uthetha kumava kunye nomfundi kwisimo sekhompyutheni ye-intanethi, mhlawumbi iyafana noko aya kufumana kwiprogram ye-intanethi. Uprofesa uchaza uhlobo lwekhosi kwaye uxoxe ngomsebenzi wabafundi kuloo ndawo. Le leta ixhasa isicelo sabafundi kwiprogram ye-intanethi kuba amava ka-profesa athetha ukukwazi ukuphumelela kwimeko yokufundela kwi-intanethi. Umzekelo othile wokuthatha inxaxheba kwabafundi kunye negalelo kwikhosi kuya kuphucula le leta.
Le ileta efanayo ayisebenzisekanga kakhulu kubafundi abasebenzisa iinkqubo zemveli zetena kunye nemveli ngenxa yokuba i-faculty iya kufuna ukwazi ngobomi bokusebenzisana kwangempela-nobomi kunye nokukwazi ukuthetha kunye nokuhamba nabanye.
Ileta Yomzekelo YeNcomo
IKomidi Edibeneyo Yokumkelwa:
Ndibhalela egameni lesicelo se-Stu Dent kwiprogram ye-intanethi ye-Education kwi-XXU.
Zonke zam amava kunye neStu zifana nomfundi kwiikhosi zam kwi-intanethi. Isifundo esibhalisiwe kwiNtshayelelo yeMfundo (ED 100) kwiklasi ye-intanethi ehlobo, 2003.
Njengoko uyazi, iikhosi ze-intanethi, ngenxa yokungabikho kokusebenzisana ubuso nobuso, zidinga iqondo eliphezulu lokukhuthaza inxalenye yabafundi. Le khosi ihlelwe ukwenzela ukuba nganye yunithi, abafundi bafunde iincwadi zezifundo kunye neentetho endizibhalileyo, zithumela kwiifom zengxoxo apho zixoxisana nabanye abafundi malunga nemiba ephakanyiswe ukufundwa, kwaye bazalise enye incoko.
Ikhosi ye-intanethi ye-intanethi ixakeke ngokukodwa njengokuba umxholo we-semester ugcwele umxholo uhlanganiswe kwinyanga enye. Kwiveki nganye, abafundi balindeleke ukuba baqonde umxholo oza kuboniswa kwiintetho ze-2 iiyure ezimbini. Izifundo zenzelwe kakuhle kweli nqanaba, zifumana amanqaku okugqibela angama-89, A-.
Oku kulandelayo ku-Fall (2003), wabhalisa kwi-Early Childhood Education (ED 211) kwiikhosi ze-intanethi waza waqhubeka nokusebenza kwakhe kwinqanaba eliphezulu, efumana amanqaku okugqibela angama-87, B +. Kuzo zombini iikhosi, uStuli wayethumela umsebenzi wakhe ngexesha kwaye wayenendima ebandakanyekayo kwiingxoxo, ethatha inxaxheba kwabanye abafundi, kunye nokwabelana ngemibandela ebonakalayo kumava akhe njengomzali.
Nangona ndingazange ndihlangabezane noBomi ubuso nobuso, ukusuka ekusebenzisaneni kwethu kwi-Intanethi, ndiyakwazi ukufakazela ukukwazi kwakhe ukugqiba iimfuno zemfundo yeprogram ye-XXU ye-Intanethi yeMfundo. Ukuba unemibuzo, nceda ukhululeke ukudibana nam (xxx) xxx-xxxx okanye i-imeyili: prof@xxx.edu
Ndiyabulela njani uNjingalwazi ngokuBhala iNcwadi yoNcoma
Iimviwo zeeNkcazo zeZikolo zeSampula zeSampula
8 Iinkcukacha zeeNcwadi zoNgconyiso zeSikolo seNgcaciso
Ngubani omele ucele i-Letter Recommendation?
Ndingayifumana njani iNcwadi yeNcomo xa ndiya kwiYunivesithi ye-Intanethi?
Yintoni efuneka ukuba ifakwe kwiNcwadana yoNcoma?
Iingcebiso ezi-7 zokubhalwa kwabampofu - I-Letter of Recommendation
Unokucela njani iNgcaciso yeNcwadi 2 Iminyaka kamva: I-imeyile yesampula
12 Musa ukufumana iiNcwadi zoNcomelo kwiSikolo seGreyd
Imibuzo kunye nemiyalelo yokucela i-Letter Recommendation ye-Grad School
I-Mythology: Inkcazo kunye nemizekelo
Usuku Lokuqala Lomhlaba?
Iimigaqo zoTshintsho: Ukhetha njani na iLizwi lokusetyenziswa?
Nazi izicwangciso zeTectonic okanye iiLithospheric Plates
PH, pKa, Ka, pKb, kunye neeKho echazwe
I-Blood Fake kunye ne-Guts i-Halloween Recipe
Ziziphi iilungelo lemfuyo?
Ukulungisa Iiphene kwiSivumelwano-Isivumelwano seVesi
IsiFrentshi Sichazwa ngeNcwadi H
Isikolo samabanga aphakamileyo ukulungiselela kuMathe
Hanukkah Iingoma: Hanerot Halalu kunye noMaoz Tzur
I-Top 100 Country Singers Yonke ixesha
Ukubiza umnxeba wakho kwiklasi kwixesha lokuqala
Imbali yeengelosi zeNKrisimesi
Iifoto ze-Polar Bear Attack
Ziyintoni na ii-Doodle zakho zeentyantyambo?
Izidumbu zeDermestid, iintsapho zeDermestidae
Yintoni Okufanele Uyazi Ngesivumelwano seCEDAW yamaLungelo eSintu
Igosa likaHolly King kunye no-King King